Ganacsiga iyo FarshaxankaFund abaalmarinta ku dhowaad $ 11 milyan oo gargaar masiibo ah oo loogu talagalay hay'adaha samafalka ee Washington - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga iyo ArtsFund ayaa abaalmarin ku dhowaad $ 11 milyan oo gargaar faafa ah u fidiyay hay'adaha samafalka ah ee Washington
In ka badan 700 urur oo ku yaal 34 degmo ayaa hela deeqo si ay uga caawiyaan ka soo kabashada saameynta COVID-19
SEATTLE, WA. - ArtsFund, oo kaashanaysa Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, ayaa bilaabi doonta inay u qaybiso $ 10.78 milyan oo deeqo soo kabasho ah 702 aan macaash doon ahayn 34 degmo oo gobolka oo dhan ah toddobaadkan. Ku Gargaarka Bulshada ee aan macaash doonka ahayn (NCR) barnaamijka deeqda ku dhawaaqay May 3, 2021 waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo maalgelin muhiim u ah farshaxanka, dhaqanka, sayniska, iyo ururada hidaha; ururada xaafadaha; isboortiga iyo madadaalada kooxaha aan macaash doonka ahayn; iyo ururada adeega ruug cadaaga ee uu saameeyay faafida.
Codsadeyaasha waxaa lagu casuumay inay codsadaan inta udhaxeysa $ 2,500 ilaa $ 25,000. Deeqaha ayaa la siiyaa qof kasta xaq u urur codsadey, oo daboolaya in ka badan 91% wadarta lacagaha la codsaday. In ka badan 70% dadka abaal-marinta la siiyay waxay soo sheegeen miisaaniyadihii ugu horreeyay ee cudurka kahooseeya $ 500,000.
Eeg liistada dhammeysteyaasha ee abaalmarinta deeqda HALKAN.
Michael Greer, Madaxweynaha ArtsFund iyo agaasimaha guud, "Gundhigooda, ururada aan macaash doonka aheyn waxaa wata dad u adeegaya dadka, iyo u heelanaanta guud ee cudurka aafada ayaa haysay bulshooyin aan tiro lahayn iyagoo u fidinaya dadka ay ka soo jeedaan gargaarka iyo adeegyada soo kabashada." "ArtsFund waxay ku faraxsan tahay inay la kaashato Ganacsiga aqoonsiga doorka muhiimka ah ee aan macaash doonka ahayn, iyo gaar ahaan farshaxanka iyo dhaqanka, oo ka ciyaara sidii loo joogteyn lahaa bulshooyinka kobcaya ee firfircoon."
"Lacagtani waxay bixiyaan ilo dhaqaale oo muhiim ah si dadka looga dhigo kuwo shaqeeya oo firfircoon xoojinta bulshada iyo dhaqaalahooda maxalliga ah," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. Maaddaama aan dhammaanteen dib u qiyaaseyno mustaqbalkeenna wadajirka ah, saameynta wanaagsan ee dhaqaale ee kaalmooyinkan diiradda saaraya bulshada ayaa gacan ka geysan doonta sii socoshada sii socoshada heerarka soo kabashada ee soo socda.
Ku dhowaad 90% dhammaan dadka wax qaata waxay filayaan in dakhligooda kasbaday musiibada kadib uu hoos u dhici doono in ka badan 30%.
Tusaalooyinka hoos ku taxan waxay ka tarjumayaan qoto dheer iyo ballaca abaalmarintan ay ku yeelan doonaan bulshada ay u adeegaan.
Bulshada Mareykanka ee Afrikaanka, Dhaqanka, iyo Waxbarashada (Franklin County) waxay kaqeyb qaadataa Bulshada Mid-Columbia hagaajinta tayada nolosha Afrikaanka-Ameerikaanka iyo kordhinta wacyiga ku saabsan kaqeybgalka African-American iyo tabarucaadka ayadoo loo marayo howlo dhaqan iyo waxbarasho iyo barnaamijyo wacyigelin ah
Matxafka Carruurta ee Walla Walla (Walla Walla County) waxay siisaa booqdayaasha da 'kasta iyo dhaqammo kala duwan fursad ay ku bartaan, ku sahamiyaan kuna qiyaasaan ciyaarta is dhexgalka ah.
Iftiiminta Dhagoolaha (King County) waxay ku dhiirrigelisaa oo ku soo bandhigtaa Dhaqanka Dhagoolayaasha iyo Luqadaha Saxeexa iyada oo loo marayo farshaxanka.
Ururka Horumarinta Xaafadaha Delridge (King County) waxay isku daraysaa Fanka, Dabeecadda, iyo Xaafadda si loo dhiso loona joogteeyo Delridge firfircoon.
Ururka Haweenka ee Karate (King County) waxay siisaa qiime jaban, oo tayo sare leh oo ku saabsan tababarka karate-ka dadka la dhibaateeyey ee si aan habboonayn, oo ay ku jiraan dadka u aqoonsada inay yihiin dumar, carruur, iyo kuwa loo takooray sababo la xiriira jinsiga.
Xididdada Haida (King County) wuxuu ilaaliyaa luuqada Haida ee halista ku jirta, wuxuu isku xiraa xubnaha bulshada ee ku nool aaga Seattle dhaqanka iyo luuqada Haida waxayna taageertaa isbadalka hal abuurka ee muusikada cusub ee wadaniga ah, farshaxanka, iyo buugaagta.
Hazel Dell Little League (Clark County) wuxuu baraa aasaaska baseballka madadaalo, jawi ku saleysan xirfado u saamaxaya ciyaartoydu inay ku raaxeystaan ​​khibrada baseball, horumarinta jir dhiska, isku kalsoonida, anshaxa, iyo isboorti wanaagsan si ay ugu soo qaataan sifooyinkan mustaqbalkooda nololeed ee mustaqbalka. .
Mi Centro (Deegaanka Pierce) wuxuu kobciyaa horumarka bulshada Latino iyo Asaliga asaga oo siiya adeegyo bulsho iyo barnaamijyo waxbarasho halka ay ku sharfayaan hidaha iyo dhaqanka farshaxanka.
Parasport Spokane (Degmada Spokane) waxay siisaa tababar, madadaalo, iyo fursado tartan dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee naafada jireed.
Shaqooyinka Puget (King County) waxay bixisaa beel loo wada dhan yahay oo dadka codkooda oo dhan laga maqlo; bulsho LGBTQ-saaxiibtinimo leh oo u furan jinsi kasta - gaar ahaan transgender iyo non-binary Singers; beel aan ku kulanno si aan u sameyno muusik qurux badan isla markaana aan kor ugu qaadno codadka la takooro ee lagu raadinayo caddaaladda bulshada.
Dagaalyahannada Nabadda ee Adeegga ah (Degmada Franklin) waxay dhigtaa xayawaanada adeegga leh halyeeyo imanaya guryahooda iyagoo wata dagaal la xiriira PTSD iyo naafooyin kale.
Rinjiyeynta Daaweynta Windhaven (Clark County) waxay dhiirrigelisaa bogsashada waajibaadka firfircoon, keydka iyo halyeeyada la il daran saameynta Dhibaatada Cadaadiska Dhibaatada Kadib (PTSD), Dhaawaca Maskaxda Maskaxda (TBI) iyo dhaawacyada kale ee adeegga la xiriira.
206 Zulu (King County) waxay bixisaa meelo banaan oo la heli karo iyadoo bulshada loogu adeegaayo kor u qaadista, ilaalinta, iyo dabaaldega dhaqanka Hip Hop.
Lacagta deeqda ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo kharashyada dhacay intii u dhexeysay 1-dii Maarso, 2020 iyo Juun 30, 2021 sababo la xiriira dhaqaale xumo ay sababtay CUDUR-19 faafa. Qaatayaasha deeqaha bixiya waxay sheegaan adeegsiga ugu sarreeya ee maalgelinta, sida ay u kala mudan yihiin, oo ay ka mid yihiin mushaaraadka shaqaalaha, barnaamijyada, kirada / amaahda guryaha, iyo dib u furida isgaarsiinta iyo wacyigelinta.
← Saddex kal-fadhi oo cusub oo ScaleUp ah: Dib-u-dhiska Tababarrada ganacsiga bilaashka ah ee la qorsheeyay $ 2.2 milyan ayaa la siiyay 31 Hay'adaha Adeegyada Halyeeyada ah ee gobolka Washington →